Iimpawu kunye nohlobo lwezindlu zendalo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Iimpawu kunye nohlobo lwezindlu zendalo
Ukusebenza kwamandla kunye namandla ahlaziyekayo ekhuthaza ngakumbi amakhaya ukuba abe luhlaza kwaye athathe inkathalo enkulu kwindalo esingqongileyo. Izindlu zendalo zezi ukusetyenziswa kwamandla kuncinci kwaye ayivelisi mpembelelo kwindalo esingqongileyo, zombini ngokokukhutshwa kwenkunkuma.
Kodwa ukuze sikwazi ukwakha indlu yendalo kufuneka siqale sazi ukuba zeziphi izinto eziyilungeleyo kwaye zeziphi ezingenzi mpembelelo kwindalo esingqongileyo, ekwakheni nasekusebenziseni kwayo. Ukongeza, kukho iindidi ezininzi zezindlu zendalo ngokuxhomekeke kwindawo ezakhiwe kuyo, izinto ezisetyenzisiweyo, umsebenzi ofuna ukubanika wona, njl. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngezindlu zendalo?
1 Iimpawu zezindlu zendalo
1.1 Uyilo lweBioclimatic
1.2 Ukuhlonipha okusingqongileyo
2 Iindidi zezindlu zendalo
2.1 Izindlu ezenziwe ngamaplanga
2.2 Izindlu zezitena ezinobubele
2.3 Izindlu zekhonkrithi zendalo
3 Zithini izibonelelo zendlu yendalo?
Iimpawu zezindlu zendalo
Into yokuqala ngaphambi kokwazi iintlobo kunye nomehluko okhoyo kwizindlu zendalo, siza kwazi iimpawu zazo kunye nendlela ezisebenza ngayo. Indlu yendalo yindawo yokuhlala thatha ithuba lobutyebi bendalo belanga kunye nomhlaba kwaye ikwahlonipha okusingqongileyo ngexesha lokwakhiwa kwayo kwaye nje ukuba igqityiwe.
Ukulungiselela ukwandisa izibonelelo ukuya kuthi ga kubuninzi kulwakhiwo lwayo nakwinqanaba lokusetyenziswa kwayo, uyilo lwezindlu zendalo kufuneka luphucukile kwaye luhlangabezane neemfuno ezithile, ezinje:
Indlu enoyilo lwe-bioclimatic iyakwazi ukuphucula izixhobo ezibonelelwa yindawo esingqongileyo kuye phezulu, njengeeyure zokukhanya kwelanga kunye nobushushu obukhutshwa ngumhlaba ukufudumeza ikhaya kwaye, kwelinye icala, imimoya yomoya yokungenisa umoya nokupholisa indlu.
Ukwahlula iindonga kutshintsho lwequbuliso kwiqondo lobushushu ngaphandle, ezi zoyilo ze-bioclimatic zibonakaliswe ngokuba nobukhulu obukhulu kakhulu bokugquma kunezinto eziqhelekileyo. Ngale ndlela, akukho bushushu bangaphandle okanye ingqele ekwaziyo ukungena ngaphakathi endlwini kwaye iqondo lobushushu elingaphakathi linokugcinwa lizinzile, ngaphandle kwesidingo somoya okanye izixhobo zokufudumeza.
Sele inyani yokonga ngokugquma inika izibonelelo zamandla, kuba siyathintela Ukukhutshwa kwegesi eluhlaza emoyeni ngenxa yokusetyenziswa gwenxa kwamandla ombane ukufudumeza okanye ukupholisa ikhaya. Ngale nto yokuzahlukanisa siza kunceda ekulweni utshintsho lwemozulu.
Uyilo lweBioclimatic nalo ukuqhelaniswa ngokufanelekileyo ukubamba imitha yelanga kangangoko kunokwenzeka. Ingakumbi ukujonga ezantsi, ihlala iyeyona ibona eyona mitha yelanga. Ukongeza, obu bushushu bunokugcinwa zizinto ezine-inertia eshushu, ezinako ukugcina ubushushu emini kwaye zibukhuphe ebusuku xa kubanda.
Ukuvelisa imisinga yomoya engenisa umoya kunye nendlu endlwini inokubekwa iintendelezo ezingaphakathi ukwenzela ukuba umoya ungene kuwo onke amagumbi endlu.
Olunye uphawu oluzalisekiswa zizindlu zendalo kukuba izinto zabo zihlonipha indalo. Oko kukuthi, izinto ezakhiwa ngazo Zizinto zendalo, ezinokuphinda zisebenze okanye ezinokurisayikilishwa kwaye zinendawo encinci yendalo. Ukongeza, sizama ukusebenzisa izixhobo ezifuna amandla amancinci, zombini kwimveliso nakwizithuthi zabo.
Okongezelelekileyo esikongeza kwezi zinto zezi kukuba azihloniphi okusingqongileyo kuphela, kodwa zikwayimpilo nentlalontle yabantu. Kungenxa yokuba izinto ezakhiwa ngazo izindlu zendalo ayinazo iikhemikhali okanye ityhefu enokuthi ichaphazele impilo yethu kwaye ingatshintshi imagnethi ngaphakathi endlwini, inceda ukufezekisa imeko entle ngaphakathi.
Izixhobo ze-Hygroscopic, umzekelo, zilawula ukufuma ngokwendalo, ngenxa yoko inwebu yethu yokuphefumla kunye nokuphefumla kwethu akuyi kuchaphazeleka kukufuma okuphezulu kakhulu okanye okuphantsi kakhulu.
Iindidi zezindlu zendalo
Kuxhomekeka kwinto eyakhiwe ngayo izindlu zendalo apho kukho iintlobo ezahlukeneyo. Into ebalulekileyo ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuba indlu ifuna iintlobo ezahlukeneyo zezinto kwaye kunzima kakhulu kuzo zonke ukuba zihlangane nezi mpawu zichazwe apha ngasentla.
Ngokomzekelo, izindlu zemithi nezitena Banokuhlangabezana neempawu ezichaziweyo ngokuxhomekeke ekubeni ulwakhiwo lwabo luyahlonipha na okusingqongileyo kunye nabantu abahlala kulo. Nangona kunjalo, izindlu zekhonkrithi musa ukuhlangabezana neenqobo zendalo kunye nezinto ezisempilweni, kuba ikhonkrithi ngokwayo inezinto ezinetyhefu ekubunjweni kwayo ezingekho kwindalo okanye esempilweni. Kodwa unokwenza uhlalutyo lwezi zindlu ukubona ukuba ingaba luhlaza kanjani indlu.
Izindlu ezenziwe ngamaplanga
Umthi yinto yendalo ngokugqwesa, ubhetyebhetye kwaye izisa ubushushu obuninzi ekhayeni lethu. Olona loncedo luphambili kukuba umthi unawo amandla e-hygroscopic kwaye unceda ukugcina ukufuma endlini kufanelekile. Kufuneka siqwalasele ukuba iinkuni iphathwa nge-varnish, ii-pores ziya kugqunywa kwaye azizukukwazi ukwenza umsebenzi wayo we-hygroscopic.
Olunye uncedo olunikwa ngumthi kwindlu yendalo kukuthintela ubushushu bayo. Ukugquma ikhaya, kokubanda nakubushushu, iinkuni zinokusikhusela kumaqondo angaphandle. Ngokwayo sisixhobo esigqibeleleyo sokulungisa, kodwa ukuba sidityaniswa kunye nezinto ezithile ezinceda ukukhusela nangakumbi, ukusebenza ngokukuko kuya kuba kukhulu.
Ubushushu luphawu lwangaphakathi lomthi. Oko kukuthi, nangona ubushushu obuziswa ngumthi endlwini bungenakulinganiswa ngamanani, kuyinyani ukuba umgangatho owenziwe ngomthi uthambile kwaye wenza iinyawo zethu, ubume beendonga, kwaye zinike imvakalelo yokuba ngaphezulu entofontofo. ekubuyiseni sisixhobo esiphilayo.
Uloyiko oluqhelekileyo lwezindlu ezenziwe ngamaplanga nguye onemililoNangona kunjalo, imigaqo kwizindlu ezenziwe ngomthi ingqongqo kakhulu xa kuziwa ekubekeni umbane kwezona ndawo zibuthathaka ekunokwenzeka ukuba zibambe umlilo. Imililo yasekhaya namhlanje ihlala ibangelwa zizinto ezingakhathaliyo ezinje ngezitovu ezingakhuselekanga ezihlala zivutha iisofa, iikhaphethi okanye iikhethini kuqala. Kodwa le mililo inokwenzeka kwizindlu zalo naluphi na uhlobo.
Kuyo nayiphi na imeko, xa kusenzeka umlilo ochaphazela ubume beplanga lekhaya, into evutha kuqala yile umaleko ongaphandle weplanga kwaye oku kwenziwa ngekhabhoni.
Olu luhlu lunye, esele lutshisiwe, lisebenza njengokhuseleko lokuqala oluthintela yonke eminye iinkuni ukuba itshe ngokukhawuleza.
Izindlu zezitena ezinobubele
Izindlu zezitena zendalo zezesibini ezakhiwe kakhulu, kuba yeyona ndlela isetyenziswayo embalini, emva komthi.
Ngaphambi kokuba siqale ukubachaza, kufuneka siyithathele ingqalelo loo nto kukho amawakawaka eentlobo zezitena, ke nganye iya kuba neempawu ezizodwa. Nangona kunjalo, ukwenza ngokubanzi, sikhankanya ukuba ezona zitena zilungele ulwakhiwo lwezindlu zendalo zezi zenziwe ngodongwe olungagqunywanga, kuba isixa esikhulu samandla siyafuneka xa kudutyulwa, okuthetha impembelelo enkulu kwindalo esingqongileyo.
Izitena ababoneleli ngeenzuzo ezifanayo okanye izibonelelo ezifana neenkuniKuba uninzi lwazo kunyanzelekile ukuba lusebenzise isifudumezi esishushu. Ukongeza, iikona zendlu zihlala zineengxaki zokuyekiswa kusistim kwaye ke azilawuli ubushushu bangaphandle ngokufanelekileyo.
Kumxholo wemililo, izitena zisabela ngcono kakhulu, kuba azitshisi okanye ziwusasaze umlilo. Ukwakhiwa kwezitena kuhlala kufuna, kwimeko ezininzi, ubukhulu obukhulu be-facade kunye neendonga zangaphakathi kunenkqubo yeenkuni ezilula. Ngenxa yoku, indawo eluncedo yendlu yethu iya kuba ncinane noko kwezinye iimeko.
Kwiindawo zokudibanisa phakathi kwezitena, sebenzisa izixhobo zikhuselekile kwimpilo yethu kwaye zinempembelelo encinci kwindalo esingqongileyo.
Ezinye iintlobo zokwakhiwa kwezitena zezi:
Iindonga zezitena ezinenkathalo
Udonga lwelitye lendalo
Izindlu zekhonkrithi zendalo
Olu luhlobo lokugqibela lendlu eluhlaza esiza kuyibona. Ikhonkrithi yinto yamatye eyenziweyo eyenziwe ngesamente, izinto ezihlanganisiweyo, amanzi kwaye, kwiimeko ezininzi, izongezo ukuguqula ezinye zeempawu zayo. Oku kwenza ulwakhiwo ayisiyonto iphela yendalo, kuba ayihlangabezani neemfuno zolwakhiwo oluzinzileyo ngaphandle kweempembelelo kokusingqongileyo.
Xa kuthelekiswa nezitena kunye neenkuni, ikhonkrithi ayinamandla afanelekileyo okufudumeza kwaye ayinayo i-hygroscopic, ke awulawuli ubushushu kunye nokufuma kwendawo yangaphakathi kakuhle. Ukongeza, inendawo enkulu yokuphila, kuba ifuna isixa esikhulu samandla kwimveliso yayo.
Isinyithi sesinye sezinto esimele ukusiphepha nakwezinye iintlobo zezindlu zendalo, kuba ayisiyondalo kwaphela kwaye ayikhethi imeko esempilweni endlwini ngokuguqula imeko yemagneti yendalo esingqongileyo.
Kuba ikhonkrithi yinto esetyenziswa ngokubanzi kwihlabathi liphela, yenza ukuba ibe yinto engabizi kakhulu kwaye efikelelekayo Lonke uhlahlo-lwabiwo mali.
Zithini izibonelelo zendlu yendalo?
Umfanekiso - Wikimedia / Lamiot
Izinto eziluncedo zendlu yendalo zisekwe ekuphuculeni ukusebenza ngokukuko kunye nokuncitshiswa kwempembelelo yokusingqongileyo kunye neenyawo zendalo. Ikhaya ngalinye lenzelwe ngohlobo oluthile ukuze libe nezinto ezininzi ezahlukeneyo ezivela komnye nomnye. Nangona kunjalo, ezona mfuno ziphambili ekufuneka behlangabezana nazo ukuqinisekisa ukuba bonke banemisebenzi efanayo yile ilandelayo:
Uyilo lweBioclimatic: isekwe ekusetyenzisweni kwezixhobo zokwakha ezizinzileyo kunye nezinto ezihlaziyiweyo. Ngale ndlela, ukuncitshiswa kokusetyenziswa kwemathiriyeli ekrwada kunye nefuthe lokusingqongileyo eliveliswe ngokwakhiwa kunye nokusetyenziswa kwezixhobo ezichaziweyo kuya kufezekiswa.
Ukuziqhelanisa: indlu kufuneka ijolise ekuphuculeni izixhobo zamandla.
Ukukhuselwa kwelanga: Njengokuqhelaniswa nokuzama ukusebenzisa izixhobo zamandla, kuya kufuneka uphinde ukhuseleke kwimitha yelanga.
Thatha ithuba lesiphumo sesitayile: Kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla ombane, ubushushu bendlu kufuneka busetyenziselwe ukufudumeza. Ngale ndlela, umphumo wendalo yendalo esetyenzisiweyo usetyenziselwe ukufezekisa ubushushu obulungileyo.
Ukutywina kunye nokugquma: Ukutywina kunye nokugquma kubalulekile ekulawuleni ubushushu bangaphakathi. Enkosi ngokugquma ngokufanelekileyo nangokutywina, sinako ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla ombane ekhaya. Umzekelo, ehlotyeni ukusetyenziswa kwamandla kwomoya opholileyo kunokuhla.
Inertia eshushu: inxulumene neyangaphambili. Kubalulekile ukujonga izinto ezinokuba namandla obushushu. Ezi zizinto ezinokudlulisela amandla ngcono ekusebenziseni amandla ombane amancinci.
Eyona njongo iphambili yemisebenzi yendlu eluhlaza kukuphungula umkhondo wekhabhoni kunye nokwenza ubutyebi bendalo ngcono kakhulu.
Ngendlela yokuqukumbela, kunokuthiwa ezona zindlu zisebenza kakuhle kwendalo zezi zakhiwe ngomthi. Ngolu lwazi unokwazi okungakumbi malunga nezindlu zendalo kunye neempawu zazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Iimpawu kunye nohlobo lwezindlu zendalo
UVictor R Castañeda R sitsho
Oku kundikhuthaza ngakumbi ukuba ndiqhubeke nokuphanda izindlu eziluhlaza.Ndiyabulela, uThixo akusikelele.
Phendula kuVíctor R Castañeda R
Umatshini womoya wasekhaya
Iinjini yomoya ethe nkqo